FTP Client - MYSTERY ZILLION
April 2008 edited January 2010 in Web Base
FTP Client တွေထဲမှာ ဘယ်ဟာ အကောင်းဆုံးပါလဲ ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် Hosting တစ်ခုအတွက် FTP သုံးစရာရှိလို့ပါ။
နောက်ပြီး ကိုစေတန်ပြောတော့ Filezilla ကို မြန်မာပြည်ကနေ သုံးလို့ မရဘူးဆိုတာကကော ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟင်။ Port တွေ ပိတ်ထားလို့ လား ခင်ဗျာ။ FTP Port 21 ကို ပိတ်ထားတာလား ဟင်။:13:
FTP Port ကိုပိတ်ထားပါဗျာ... ဒါပေမယ့် ကျော်လို့ခွလို့ရတယ်... ဖွက်ထားမှ ဖြစ်မယ်... ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ bagan က သိသွားမှာဆိုးလို့.. :P
ကျွန်တော်ကတော့ SmartFTP ကိုပဲသုံးနေပါတယ်...
Bagan ကနေ FTP ကို ပြန်ဖွင့်ပေးထားပါပြီ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီလိုပဲ သုံးနေတာပဲ။ အခု ကျော်ခွနေရတာဆိုလို့ SSH ပဲရှိတော့တယ်။
ကျွန်တော် အသုံးများတဲ့ FTP Client က Filezilla ပါ အလကားရပြီး သုံးလို့ ကောင်းတယ်လေ ရှယ်ပဲ။
ကျွန်တော်က Filezilla ကိုသုံးပါတယ်။ အရင်တုန်းက File Upload တင်ရတာအဆင်ပြေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်ကစပြီး file upload တင်ရတာ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ 150 File status okay; about to open data connection. လို့ပြပြီးရင် connection time out ဆိုပြီး error တက်သွားတယ်။ ညဘက် စမ်းလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ ပေါ်နေတယ်။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်။ ကူညီပါအုံး။ :77: :77: :77:
အဲ.. bagan က ftp ပိတ်သွားပြီဗျ။ သုံးမရတော့ဘူး။ yourfreedom နဲ့ဆိုရင်တော့ ရတယ်ဗျ။
ftp ပိတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဟင်။ပန်းခက်သိသလောက်တော့ ftp သုံးချင်ရင် bagan မျာလျှောက်ရတယ်လေ။ အဲဒီတော့မှဖွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလား။ ftp client software ဆိုရင်တော့ ws ftp software ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။
filezilla ကို Windows မှာ သွင်းရတာ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါ။ exe လေး run လိုက်ရုံပါပဲ။
Ubuntu မှာ ဆိုရင်တော့ tar.gz ကနေတစ်ဆင့်သွင်းရတာဆိုတော့ နည်းနည်းလေး မျက်စိလည်သွားမလားပဲ။
How to install filezilla on Ubuntu ကိုတော့ ဒီမှာ ကြည့်ပါ။ လွယ်ပြီး ထိရောက်တဲ့ ရှင်းပြချက်လေးပါ။
Ubuntu မှာ ကျွန်တော်ကတော့ gftp ပဲသုံးတယ်လေ...
sudo apt-get install gftp ဆိုရင် ပြီးပြီပေါ့..
ကျွန်တော်ကတော့ Cute Ftp Pro 8 လေးသုံးပါတယ်... တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်...
သုံးလို့လဲ အဆင်ပြေပါတယ်... SSH ကိုလဲ သုံးလို့ရပါတယ်... ဒါပေမယ့် သုံးနည်းလေးတော့ ဒီမှာ တင်လို့မရလို့ မတင်တော့ဖူးနော်... ဘဂံ သိသွားလို့ ပိတ်နေပါအုန်းမယ်...
ပန်းခက်သိသလောက်ေ တာ့ ftp သုံးချင်ရင် bagan မျာလျှောက်ရတယ်လေ
ဟုတ်ပါတယ် အစ်မရေ။ ကျွန်တော်လဲ ဆရာတွေပြောတာကြားဖူးပါတယ်။ ftp သုံးချင်ရင် သွားပြောရတယ်တဲ့။
ကျေးဇူးပြုပြီး ftp သုံးပုံသုံးနည်းလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးကြပါလား
ftp ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ..။ ကျွန်တော်က ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဟိုတိုတိုထွာထွာကို လိုက်လေ့လာရင် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု လုပ်ထားပါတယ်...။ အဲဒီ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို တင်ဖို့ အတွက် ဆော့ဖ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ filezilla client ကို သုံးရမယ်ဆိုတာလဲ သိပါတယ်..။ အဲဒါကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲ ဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးပါလား..။ ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ ဆိုတာလေးကို ပါပြောပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ..။:77:
in myanmar... use
need ftp address , username and password.
:O Nop I'm using from foreign. I have the ftp address, user name and password, but I want to know how can I process? If you don't mind, please... reply to me.